Madaxweyne Xasan oo soo dhaweeyay wax ka bedelka Dastuurka Galmudug ee Xuduuda Puntland la wadaagto – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo dhaweeyay go’aanka Baarlamanka Maamulka Galmudug uu ku bedeley qodob ka mid ah Dastuurkiisa, oo ku saabsanaa xadka uu la wadaago Maamulka Puntland.
Baarlamanka Galmudug, ayaa gebi ahaanba bedeley qodobkaasi oo dhigaayay in xadka Galmdug uu egyahay Gobolka Nugaal, oo Maamulka Puntland uu ka arrimiyo.
Madaxweynaha, ayaa sheegay in go’aankan uu yahay mid loo baahnaa oo abuuraya jawi is afgarad iyo in horumarka iyo nabadda laga wada shaqeeyo.
“Ujeeddada laga leeyahay dhismaha dowlad goboleedyada waa baahinta xukunka iyo in la fududeeyo helista adeegyada bulshada, waana soo dhoweynayaa tallaabo kasta oo ujeedkaasi sidii lagu gaari lahaa dhiirigelinaysa. Haddii ay jiraan tabashooyin maamullada dhexdooda ah, waxaa mar walba inoo furan wadahadal iyo in la raadiyo xal nabadeed, arrimahaas ayaana dan u ah shacabka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa mar kale ku celiyay in nabadda iyo horumarka laga wada shaqeeyo, lagana fogaado colaadaha, khilaafka iyo wax kasta oo shacabka kala fogayn kara.
Hadalkan, ayuu Madaxweyne Xasan ku sheegay War Saxaafadeed caawa laga soo saaray Xafiiskiisa Magaalada Muqdisho, xilli maanta uun uu dib ugu soo laabtay Xarunta Somaliya